Indawo Yokuphumula Yangasese ye-Yellowstone enekhishi ne-Sauna - I-Airbnb
Indawo Yokuphumula Yangasese ye-Yellowstone enekhishi ne-Sauna
I-ikamelo lezivakashi ephelele ibungazwe ngu-Mitch And Mandy
U-Mitch And Mandy Ungumbungazi ovelele
Siyakwamukela Ekhaya lethu! Yindlu enhle yesitayela se-Cape Cod yekhulu leminyaka enezibuyekezo eziningi zesimanje kodwa konke lokho okuyisidala. Ikamelo lezivakashi indawo yokungena eyenzelwe izivakashi kuphela nokuzingenisa ngekhodi. Sine-inthanethi eyi-1 ye-Gig Gig. Indlovukazi namawele kokubili banomatilasi we-memory foam okhululekile kakhulu.
Sithatha izinyathelo ezengeziwe ngenhlanzeko phakathi nalesi sikhathi, okuhlanganisa; i-LongE phakathi nokuhlanza, ukuhlanza nge-sanitizer amalineni, izibambo, amasafeyisi, izinto zikagesi kanye nama-remote kanye nenkathi “yokugcoba” yamahora angu-24 phakathi kwezivakashi.
Njengesivakashi sethu uzoba nesitezi esiphansi ngokwakho ngokupaka okungekho emgwaqweni ngaphandle nje komnyango wakho, indawo yokungena ehlukile eyenzelwe izivakashi kuphela (sizokuthumela ikhodi yokufinyelela okulula), ikhishi elinakho konke, igumbi lokuphumula (elinomabonakude we-4K, elisethwe ngokufinyelela kwevidiyo ye-Peloton, umculo we-Amazon ne-Amazon prime, ividiyo ye-Amazon ne-Netflix), indlu yokugezela ephelele kanye ne-sauna enkulu.
Ekhishini sine-french press, iketela letiye, amabhodwe, amapani, izitsha zokubhaka, i-spice rack kanye nezinto eziyisisekelo zokudla ezifana ne-oatmeal, amanzi ahlungiwe, itiye, inhlama, ushukela kanye nebhotela njll. ongakwenza. Siphinde sihlinzeke ngokungena kwe-wifi kwamahhala namanzi ashisayo acishe abe khona kuma-shower.
Umbhede uyindlovukazi yangempela enomatilasi we-memory foam wama-intshi angu-10. Sifake ikamelo elincane ekamelweni elinombhede olala abantu ababili wase-Murphy ophindwe kabili njengedeski lalabo abadinga ukwenza umsebenzi othile ngenkathi besohambweni.
Sine-inthanethi eyi-1 ye-Gig Gig yezingcingo zokusondeza ezingenamkhawulo nokustrima ngevidiyo. I-sauna inamathawula amaningi kanokusho kanye nezingubo zokugqoka ezithokomele okwenza ukuhlala kwakho kuzwakale njenge-spa!
I-HDTV ene- I-HBO Max, I-Amazon Prime Video, Hulu, Disney+, I-Roku, Fire TV, Apple TV, I-Netflix
4.97 · 171 okushiwo abanye
Indawo yangakithi iphephile, ithulile futhi iyingqayizivele. Sitholakala emgwaqweni ontofontofo onesihlahla enkabeni ye-Idaho Falls enokufinyelela okulula emapaki, imigwaqo emikhulu, idolobha kanye nomgwaqo onguthela phansi kodwa futhi nesifunda sokuzijabulisa nokudlela eduze ne-Amon.
Ibungazwe ngu-Mitch And Mandy
Woza uhambe njengoba uthanda futhi uma udinga iseluleko mayelana nendawo unganqikazi ukubuza! Siyakuthanda ukuhlangana nabantu abasha nokwabelana ekuzijabuliseni kwabo kodwa siyabuhlonipha ubumfihlo bakho. Ngiye ngahlala lapha ukuphila kwami konke futhi ngilazi kahle idolobha nezindawo zokuzijabulisa ezizungezile. I-Freeman Park edolobheni iqanjwe ngegama likaGreat Grandpauss futhi iyindawo enhle yokuchitha isikhathi sasebhishi noma uhambe eceleni koMfula Inyoka. Uma udinga izipho ekuvakasheleni i-Targhee Ski Resort, Island Park, i-Yellowstone kanye/noma i-Grand Teton National Parks noma uhlele ukuya ukudoba ku-Fork yase-Greece noma e-Southfork yomfula weNyoka siyakujabulela ukusiza!
Woza uhambe njengoba uthanda futhi uma udinga iseluleko mayelana nendawo unganqikazi ukubuza! Siyakuthanda ukuhlangana nabantu abasha nokwabelana ekuzijabuliseni kwabo kodwa siyabu…
UMitch And Mandy Ungumbungazi ovelele